३२. निरन्तर प्रयास - Harish Bk
Home/ Article/३२. निरन्तर प्रयास
Harish BK December 27, 2017
0 3,385 1 minute read
Dr. Yogi Vikashnanda: ल संसारमा सबभन्दा चलेका पुस्तक मध्ये एउटाको नाम हो, चिकन सूप फर द सउल । यो चलेको पुस्तक मात्र हैन, यसले क्लासिक कृतिको दर्जासमेत पाएको छ । यसका लेखक द्वय हुन्– ज्याक क्यान फिल्ड र मार्क हेन्सन । यसरी विश्वकै सबभन्दा चल्ने पुस्तक लेख्ने सपना प्रायः लेखकले देख्ने गर्छन्, तर सफल भने कोही–कोही मात्र हुन्छन् । यस्ता सफलताका ज्ञात–अज्ञात थुप्रै कारण होलान् । एउटा प्रष्ट एवं प्रसिद्ध कारण हो– प्रयास, प्रयास र प्रयास ।
यस पुस्तकका लेखक द्वयले आप्mनो पाण्डुलिपि तयार गर्न अगाडिदेखि किताब ननिस्केसम्म मरिमेटेर र प्रयास गरेका थिए । स्मरण रहोस् शब्द– मरिमेटेर । उनीहरूले पुस्तक लेख्नअघि नै दिनौं, महिनौं देशका कुना–काप्चाका पुस्तक पसल र प्रकाशकसित भेटेर कस्तो पुस्तकलेख्दा बढी भन्दा बढी बिकिन्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेका थिए । उनीहरूको अपार सफलताको पहिलो कारण नै पूर्व तयारी भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । लामो समयको खोज अनुसन्धानपछि लेखक द्वयले तयार पारे–चिकन सूप फर द सउल । त्यसपछि प्रकाशककोमा बुझाए । केही समयपछि किताबका नाना कमजोरी कोट्याई लेखकहरूलाई नै फर्काइयो । यस असफलतालाई लेखक द्वयले आप्mनो हार ठानेनन्, बरु पुस्तकलाई परिमार्जन गर्ने अवसरको रूपमा परिभाषित गरे । त्यसपछि सुधारको श्रृंखला नै शुरू भयो । उनीहरू एकपछि अर्को प्रकाशकलाई पुस्तक दिदैँ फेरी फर्काएर लिदै अनि थप सुधार गर्दै रहे । उनीहरूले दुई–चार हैन, दर्जनौं रिजेक्ट हाँसी–हाँसी झेले । किनभने उनीहरू सकारात्मक सोचको महत्व बुभ्mने–बुझाउने मान्छे मध्येकै थिए । अतः किताब जति रिजेक्ट भयो त्यति परिर्माजित हुने भयो । यस कोणबाट हेर्दै आप्mनो अथक प्रयास जारी राखे । चौँतिस पल्टसम्मन् पनि पुस्तक नछापिए पछि पैंतीसौंमा पल्टमा छापियो । त्यसपछि यी लेखक द्वय रातारात दामी एवं नामी बन्न सफल भए ।
स्मरण रहोस्, विश्वकै सार्वकालीक, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मध्येको हुन् अव्राहम लिंकन । इतिहासकै राजनैतिक शिखर पुरुष बन्न सफल यी नेता आप्mनो प्रयासमा दसौँ पटक असफल भएका थिए । यहाँ सम्मन् कि उपराष्ट्रपतिको चुनावमा समेत यिनले हार बेहोरेका थिए । जतिपटक असफल भयो त्यति–त्यति नै उनी फेमस बन्दैगएको हेक्का यिनलाई थियो । र त हारमा पनि यिनी खुसी हुन्थे । यिनै अनेक असफलताका कारण अन्तमा उनी राष्ट्रपति हुन सफल भए । यो पनि निरन्तर प्रयास कै परिणाम न हो